Qingdao CO-NELE Group Co., Ltd waxaa estabilished 1993. Laga soo bilaabo hadda waxaan ugu weyn leedahay saddex saldhig saarka yihiin siday u kala horreeyaan oo ku yaalla 1.Qingdao Shangdong, 2.Xi'an Shanxi iyo 3.Liuzhou Guangxi. Setted ilaa 28 Xafiisyada Adeega Corporate ee gudaha iyo dibada ..
"Brand CO-NELE" billaabay ka Jarmal sare iyo adag falsafada farsamo, waxaan isku daro cilmi farsamo, wax soo saarka, iibinta iyo ka dib-iibka adeega wada.
mashiinada dhismaha oo ay ku jiraan saar Boom 25 Truck in 56m, la taaban karo Boom gelinayn HGY13 nooca Mobile si HGY23, Self nooca fuulitaanka 24m in ay 35m, wadar ahaan labada lug wanaagsan Small XBS saar la taaban karo serial 20-40m3 / h, JBT la taaban karo Serial fiicni saar 30-40m3 / h, HBT Serial la taaban karo Pump30-100m3 / h, Shotcret xereen Machine, Batching Plant iyo wixii la mid ah.
Waqtigan xaadirka ah, waxyaabaha our waa la waayay oo dhan Shiinaha oo la soo dhoofiyo Russia, Korea, Kazakhstan, Iran, Mongolia, Masar, Singapore, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Australia, Romania, America, Niger, Congo, Mauritius iyo dalalka kale . CO-NELE ay qaab super iyo ruuxa ku niyadsan yihiin adeegaya, waayo dunida oo dhan.
Astaamaha dhismaha ee sibidhka ...
Sida loo xaliyo xannibaadda wadata ...